Shiilaabo - Wikipedia
Place in Kililka Soomaalida, ItoobiyaTemplate:SHORTDESC:Place in Kililka Soomaalida, Itoobiya
Shiilaabo waaa magaalo taarikhi ah oo ku taala bariga gobalka Ogaden. Waana caasimada Gobalka Doh. Shilaabo waxay caan ku tahay khayraadka dabiiciga gaar ahaa shidaalka iyo saliida cariinka ah, waxay kaloo caan ku tahay xoolaha nool.
Magaalada Shilaabo oo ah magaalo madaxda GObalka Doh waxay gubatay ugu yaraan 3 jeer waxayna ka dhisan tahay meeshii afraad hada.
Shilaabo waxaa ku dhashay oo ka soo jeeda dad badan oo caan ka ahaa taariikhda geeska afrika iyo guud ahaanba afrika.
Waxaana ka mid Sayid maxamed cabdille xasan oo ahaa halyaygii xorriyada geeska afrika iyo somalida guud ahaanba.
Waxaa ka mid ahaa oo kale oo ku dhashay sareeye guuto Maxamed siyaad barre oo ahaa madax waynihii Soomaaliya intii udhaxaysay 1969 ilaa 1991, iyo qaar kale oo badan.
Shilaabo waxay kaloo caan ku tahay dhinaca isgaarsiinta iyo isu socodka, waana magaalo isku xirta inta badan magaalooyinka geeska afrika. Waxaana mara jidad badan oo u kala goosha guud ahaan geeska afrika.
waxay leedahay Gagi ama garoon diyaaraded oo caalami ah kaas oo qayb wayn ka qaatay isku socodka wadamada geeska Afrika iyo ganacsiga magaalada shilaabo.
Magaalada shilaabo waxay daris la tahay dhinaca koonfurta iyo bariga Somalia, dhinaca galbeedka Qabridahar, dhinaca Waqooyiga wardheer, koonfurgalbeedna Godey.
Dadka ugu caansan ee wax ka dhisay magaalada Shilaabo waxaa ka mid ah Adan sacab Kunool, Xaalays iyo Aw cabdi Aw Mohamed Daman oo ah ninkii Shilaabo aaskeeda lahaa, ayna ku Baxaday magaalo laga cararay camirahayaw Cabdi aw maxamed.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiilaabo&oldid=191291"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Maarso 2019, marka ee eheed 12:55.